कुमारी इक्विटी फण्डको इकाईमा आजदेखि आवेदन शुरु हुने | Artha News Nepal
Home	लगानि	कुमारी इक्विटी फण्डको इकाईमा आजदेखि आवेदन शुरु हुने
by अर्थन्यूज फाल्गुन १४, २०७७
काठमाडौं – कुमारी इक्विटी फण्डको इकाईमो आज (शुक्रवार) देखि आवेदन दिन सकिनेछ । कुमारी क्यापिटलको व्यवस्थापनमा सञ्चालन हुन लागेको यस फण्डले प्रतिइकाई रू. १० अंकित मूल्यको रू. ८० करोड बराबरको ८ करोड इकाई विक्री गर्न लागेको हो ।
कुल इकाईमध्ये कोष प्रबर्धकको रुपमा रहेको कुमारी बैंकलाई १५ प्रतिशत दरको १ करोड २० लाख इकाई सुरक्षित राखी बाँकी ६ करोड ८० लाख कित्ता सार्वजनिक निष्कासनमा ल्याएको हो । यो इकाई छिटोमा फागुन १८ र ढिलोमा फागुन २८ गतेसम्म सार्वजनिक निष्कासनमा रहनेछ ।
कम्पनीले सञ्चालन गर्न लागेको यो सामूहिक लगानीकोष योजना बन्दमुखी योजना हो । इकाई विक्री प्रबन्धकमा कुमारी क्यापिटल रहेको छ । इकाई खरीदका लागि विक्री प्रबन्धकसँगै आस्बा सेवामा सहभागी सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्था र तीनका शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ ।
साथै, मेरो शेयर सफ्टवेयर र मेरो शेयर मोवाइल एपबाट पनि आवेदन दिन सकिनेछ । आवेदन दिँदा न्यूनतम १०० कित्तादेखि अधिकतम ८० लाख कित्तासम्म माग गर्न सकिनेछ ।
१० वर्षे अवधिको यो इकाई बाँडफाँट भएको मितिले दश वर्षपछि योजनाको सम्पत्तिलाई नगदमा परिणत गरी इकाईधनीहरुलाई समानुपातिक हिसाबले प्रचलित कानून बमोजिम बाँडफाँट गरिनेछ ।
योजनाको सम्पूर्ण इकाई धितोपत्र दोस्रो बजारमा सूचीकृत गरी कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था गरिने समेत कोष व्यवस्थापक कुमारी क्यापिटलको भनाइ छ ।
kumari equitykumari equity fundmutual fundकुमारी इक्विटी फण्ड
नागरिक लगानी कोषकाे १७.८९ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव
सनराइज ब्लूचिप फण्डको इकाईमा आवेदन दिने मिति थप
बैंक अफ काठमाण्डूको स्वामित्वमा रहेको २ ओटा कम्पनीको बोलपत्र आइतवार खोलिदैं
सिंगटी हाइड्रो इनर्जीको आईपीओको आवेदन आजदेखि खुल्ला
नागरिक लगानी कोषको सस्तोमा शेयर खरीद गर्ने आज अन्तिम मौका
अन्तरराष्ट्रिय बजारमा ३० मिलियन डलरको ऋणपत्र जारी गर्दै निफ्रा